मजदुर सडकमा छन्, तर चुनावका वेला बसका बस भरेर मान्छे गाउँमा उतार्ने दलका नेता कहाँ छन् ? – Green Ilam
मजदुरको सेवामा जुटेका सुन्दर मनलाई सलाम !
सडकमा विचल्ली परेका मजदुरका विषयमा आजको नयाँपत्रिकाले यस प्रकारको मुख्य समाचार छापेको छ ।
चितवन : चितवन सदरमुकाम भरतपुरको पुल्चोकमा स्थानीय उद्यमी युवाले बटुवालाई सोधीखोजी गर्दै खाना खुवाइरहेका छन् । भोकै–तिर्खै घरतिर लम्किँदै गरेकाहरूलाई २३ चैतदेखि खाना खुवाउँदै आएका छन् । उनीहरूले स्थानीय प्रहरीको सहकार्यमै खाना वितरण गरिरहेका छन् ।
नवलपरासी : ‘सफा सुन्दर हरियाली गैँडाकोट’ अभियानले बुटवाहरूका लागि राजमार्गस्थित भृकुटी चोकमा खाना वितरण गरिरहेको छ । हालसम्म पाँच सय बटुवालाई खाना खुवाएको संयोजक गणेश सापकोटाले बताए । फ्राइड राइस, तरकारी र पानी वितरण गरिरहेको छ ।
सिराहा : काठमाडौंबाट पूर्वको यात्रामा लम्किएकाहरूलाई सिराहाको मिर्चैया र बन्दीपुरमा स्थानीयले खाजाका पोका बाँडेका छन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कर्जन्हा नगरपालिका– २ बन्दीपुरमा स्थानीय युवा र मिर्चैया नगरपालिकामा स्थानीय व्यवसायीले चाउचाउ, बिस्कुट र पानी सहयोग गरेका हुन् ।
म्याग्दी : सदरमुकाम बेनीमा स्थानीय युवा नेता बालकृष्ण सुवेदीको परिवारले सडकमा अलपत्र भेटिएकालाई निःशुल्क खाना खुवाइरहेको छ । बेनीका सडकमा अलपत्र र बेवारिसे अवस्थामा भेटिएका आठजनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अगुवाइमा उद्धार गरी खुलामञ्चस्थित टहरामा राखिएको र आफूहरूले निःशुल्क खाना खुवाएको सुवेदीले बताए ।
सुर्खेत : विभिन्न ठाउँबाट हिँडेर सुर्खेत आइपुगेकाहरूलाई स्थानीय व्यापारी हरि विष्टले यात्रामा सहयोग गर्ने गरेका छन् । स्थानीय कलाकार तथा व्यापारी विष्टले बिहीबार मात्रै चारजनालाई गाडी रिजर्भ गरेर छिन्चुबाट गन्तव्यसम्म पुर्‍याइदिएका थिए । सिलगुडीदेखि आएका दैलेखका चित्रबहादुर शाही, लक्ष्मी शाही तथा विशालकुमार योगी र लक्ष्मी वलीको उद्धार गरेका हुन् । भारतबाट आएका उनीहरूलाई मोरङमा १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राखेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले सुर्खेत र बर्दियाको सिमाना बबईमा ल्याएर छाडिदिएको थियो । विष्टले लकडाउनका वेला अँगेनो सल्काउन समस्या भएकाहरूलाई राहत पनि वितरण गरिरहेका छन् । शुक्रबारसम्म उनले वीरेन्द्रनगर र आसपासका ६० परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग गरेका छन् ।
पाल्पा : पाल्पा हुँदै दैनिक ५० व्यक्तिले गन्तव्य तताइरहेका छन् । तानसेन गरपालिका– ८ डुम्रेका केही स्थानीय बटुवाको सेवामा जुटेका छन् । जितबहादुर सिलवालको नेतृत्वमा पैसा संकलन गरेर पानी, चाउचाउ, भुजा र बिस्कुट वितरण गरिरहेका छन् ।
स्थानीयले नै पैसा उठाएर प्रहरीसँग समन्वय गरेर गाडी व्यवस्था गरी कतिपय मजदुरलाई गन्तव्यमा समेत पुर्‍याएका छन् । ‘सोमबार पोखराबाट हिँडेर शुक्रबार दिउँसो डुम्रे आइपुगेका सुर्खेतका ३६ मजदुरलाई ट्रक व्यवस्था गरेर पठाएका छौँ,’ कार्कीले भने ।
विराटनगर : विराटनगर सरोचियाका हरि अधिकारीले श्रीमती र दुई सन्तान रिक्सा चलाएरै पालेका थिए । लकडाउनपछि भने उनी समस्यामा पर्न थाले । तर, विराटनगरका युवाहरूले सडकमा बस्नेलाई खाना खुवाउन थालेपछि उनलाई राहत मिलेको छ । ‘बिहान त यहाँ खाइन्छ, बेलुका जसोतसो टार्नुपर्छ,’ उनले भने ।
बाँके : नेपालगन्जस्थित गुरुद्वाराको अगुवाइमा शिख समुदायले लकडाउनमा अलपत्र मजदुरलाई नियमित खाना, खाजा र पानी खुवाएका छन् । रिक्सा तथा ठेलागाडा चलाउने तथा आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारलाई लक्षित गरेर नियमित भोजन गराउँदै आएको शिख धार्मिक गुरु अमरजित सिंहले बताए ।
धनगढी : धनगढीमा अलपत्र बझाङ, डडेल्धुरा र डोटीका २४ जनालाई स्थानीय युवा यादव जोशीले गन्तव्यमा पुर्‍याइदिएका छन् । लकडाउनको तीन दिनपछि उनीहरू भारतबाट विभिन्न नाका हुँदै आएका थिए । जोशीले तीनवटा गाडी व्यवस्था गरेर गन्तव्यमा पुर्‍याएका हुन् । विभिन्न व्यक्तिबाट सहयोग संकलन गरेर गाडीको बन्दोबस्त गरेको उनले बताए ।
सिन्धुली : काठमाडौंबाट बिपी राजमार्ग हुँदै घर फर्किने यात्रुलाई सुनकोसी गाउँपालिकाले गाडी व्यवस्था गरेर उद्धार गर्दै आएको छ । गाडीबाट सम्बन्धित जिल्लासम्म पुर्‍याइदिने गरेको हो । अहिलेसम्म आठ हजार पैदलयात्रुलाई उद्धार गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष दीपा बोहराले बताइन् । सिरहा, सप्तरी, सुनसरी, झापा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, भोजपुर, ओखलढुंगा, खोटाङलगायत जिल्लाका नागरिकको उद्धार भएको उनले बताइन् ।
लहान : दिनरात पैदल हिँडेर घर फर्किरहेका यात्रुलाई सिराहाका विभिन्न ठाउँका मनकारीहरूले स्वस्फुर्त रूपमा खना खुवाउनुका साथै खाजा र पानी बाँडिरहेका छन् ।
सर्लाही : हरिवन नगरपालिका– ९ सुखेपोखरीमा अस्पताल चलाउँदै आएका मनकारी अमृता मैनाली र अर्जुन मैनालीको परिवारले भोकभोकै हिँडिरहेका यात्रीलाई आफ्नै खर्चमा खाना र वासको व्यवस्था गर्ने मात्रै होइन, उपचारसमेत गरिरहेको छ । वास बस्नुपर्ने यात्रुलाई उनीहरूले आफूले सञ्चालन गरेको जीवन अस्पतालमै सुत्ने व्यवस्था गरेका छन् ।
उता, सर्लाही र रौतहटको सीमामा बागमती युवा क्लबले पनि पैदलयात्रीलाई नि:शुल्क खाजाको व्यवस्था गरेको छ । क्लबले पैदलयात्रुलाई निःशुल्क बोटलको पानी, दालमोट, चिउरा, भुजा, बिस्कुट, चाउचाउ खुवाउने गरेको छ । ‘सयौँ मान्छे भोकभोकै हिँडेको देखेर क्लबको आन्तरिक खर्चबाट खाजा खुवाउने व्यवस्था गरेका छौँ,’ क्लबका अध्यक्ष किस्मतराज मैनालीले भने, ‘उनीहरूलाई खाजा खाँदै आराम गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ ।’
हेटौँडा : हेटौँडाका व्यवसायी ध्रुव अधिकारीले विभिन्न सहरबाट घर फर्किएकाहरूलाई खाजा र पानी खुवाएका छन् । काठमाडौं, पोखरा, चितवन, बुटवललगायत सहरबाट हिँडेर तराईका विभिन्न जिल्ला जानेहरूलाई सहयोग गरेका हुन् ।
लकडाउन सुरु भएको तेस्रो दिनदेखि चैत २६ गतेसम्म करिब सात हजार बटुवालाई खाजा (चाउचाउ, बिस्कुट, तरकारी, चिउरा) र प्रशोधित पिउने पानी खुवाएको उनले बताए । उनी पानी उद्योग र रोयल पार्टी प्यालेस सञ्चालक हुन् ।
‘लकडाउनको केही दिनपछि धेरै मानिस हिँडेर आएका थिए । मैले आफ्नै पार्टी प्यालेसमा उनीहरूलाई आराम गराएर खाजा र पानी खुवाएँ,’ उनले भने, ‘वृद्धदेखि बालबालिकासमेत खुट्टा सुन्निनेगरी हिँडेको देख्दा मन थाम्न सकिनँ अनि पार्टी प्यालेसअगाडि खाजा र पानी वितरण गरेको हुँ ।’
पोखरा : पोखरा महानगरपालिका– २० का अध्यक्ष सिम गुरुङले आफूले पाउने सुविधाको रकमबाट लकडाउनमा खाद्यान्न संकट भोगेका मजदुर र अतिविपन्न परिवारलाई राहत दिएका छन् । शुक्रबारसम्म उनले ७९ परिवारलाई खाद्य सामग्री दिएका छन् । स्थानीय टोल विकास संस्थाहरूको सिफारिसका आधारमा आफूले राहत वितरण गरेको अध्यक्ष गुरुङले बताए । निर्वाचन लड्दा गरेको आफूले पाउने सबै तलब भत्तालगायतका सुविधा कल्याणकारी काममा लगाउने घोषणाअनुरूप राहत वितरण गरेको उनले बताए । पहिलो चरणमा एक लाख १९ हजार सात सय रुपैयाँबराबरको खाद्यान्न खरिद गरेको उनले बताए ।
नवलपरासी : सुनवलका व्यवसायीले पैदलयात्रीलाई खाना, खाजा र पानीको व्यवस्था गरेका छन् । शुक्रबार बिहान मात्रै एक सयभन्दा बढी यात्रुलाई सामूहिक रूपमा खाना खुवाइएको छ । लकडाउनका कारण पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा सयौँ व्यक्ति भोकभोकै हिँडेर कष्टपूर्ण यात्रा गरिरहेका छन् । पछिल्लो चार दिनदेखि यात्रुहरूलाई खाना खुवाएर गन्तव्यतर्फ पठाउने गरेको ओम मिष्ठान भण्डारका सञ्चालक भाविश्वर न्यौपानेले बताए ।
धरान : धरान उपमहानगरपालिका– १८ का अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार राई (प्रवीण)को नेतृत्वमा स्थानीय व्यवसायीले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बिमारी लिएर आएका कुरुवालाई एक सातादेखि खाना खुवाउँदै आएका छन् ।
काभ्रे : लकडाउनका कारण सहरबाट घर हिँडेका पैदलयात्रीलाई बनेपाको पानस पार्टी प्यालेसले सडकमै खानाको व्यवस्था गरेको छ । काभ्रे उद्योग वाणिज्य संघको समन्वयमा विमल सोनाम, विकास श्रेष्ठ, इन्द्र श्रेष्ठ, नवीन वैद्य, निरन्जन तिमल्सिना, दीपक दाहाल, दिनेश दाहाल, अरुण थापालगायतको सहयोगमा खाना र पानीको व्यवस्था गरिएको पार्टी प्यालेसका प्रोपाइटर सूर्य श्रेष्ठले बताए ।
नमोबुद्ध नगरपालिकास्थित भकुण्डेबेंसीमा स्थानीय व्यापारीले सहयोग जुटाएर ६ दिनदेखि टाढा–टाढा जाने पैदलयात्रीलाई जुस, पानी, बिस्कुट, चाउचाउ वितरण गर्दै आएका छन् । करिब ६ सयजनालाई खाद्य र खाजा वितरण गरिएको व्यापारी ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले बताए । रोसी गाउँपालिकाले पनि बिपी राजमार्ग हुँदै तराईका जिल्ला जाने पैदलयात्रीलाई खाजा र पानी उपलब्ध गराएको अध्यक्ष दलबहादुर (डिबी) लामाले बताए ।
बागलुङ : प्युठानको गौमुखी गाउँपालिका– ३ का प्रेम बुढामगर पोखराबाट १५ घन्टा हिँडेर बिहीबार बाग्लुङ सदरमुकाम आइपुगेका थिए । उनीसँगै अर्घाखाँची र रुकुमका अरू केही साथी पनि थिए । बाग्लुङ नगरपालिका र उद्योग वाणिज्य संघको सहयोग तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा आश्रयस्थलमा खाने–बस्ने व्यवस्था गरिएका उनीहरूलाई शुक्रबार प्रहरीको गाडीमा जिल्लाको सिमानासम्म पुर्‍याइएको छ ।
त्यस्तै, गलकोट नगरपालिकाले पनि पैदलयात्री मजदुरका लागि खाना र आवश्यक औषधिको व्यवस्था गरेको छ । म्याग्दीको बेनीदेखि दाङ हिँडेका ६ जना र पर्वतको कुश्माबाट नेपालगन्जका लागि हिँडेका दुईजना मजदुरलाई खाना खुवाएर नगरपालिकाको गाडीमा खरवाङसम्म पुर्‍याएको नगर उपप्रमुख रेनुुका काउचाले बताइन् ।
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउनमा कुनै ‘कम्प्रमाइज’ नगर्न र बिल्कुलै अप्ठ्यारोमा परेकाहरूको मात्रै उद्धार गर्न निर्देशन दिएका छन् । तर, भावनामा बगेर लकडाउन खुकुलो बनाए देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
ती मन्त्रीका अनुसार बालबालिकासहित हिँडेका महिलालाई उच्च प्राथमिकता दिएर उद्धार गर्ने र अन्यलाई जहाँ पुगेका छन्, त्यहीँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने सरकारको नीति छ । यसबारे कानुनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’सँग शुक्रबार छुट्टै छलफलसमेत गरेकी थिइन् ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले वास्तविक मजदुरहरूले यथोचित राहत नपाएकै कारण लामो दूरीको यात्रा तय गरेर घर फर्किएको हुन सक्ने भन्दै उनीहरूको वास्तविक समस्या पहिचान गरेर शनिबारबाटै सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएका छन् । ‘विपन्न मजदुरहरूले अहिलेको अवस्थामा त्यत्तिकै लामो दूरीको यात्रा तय गरेका होइनन्, लकडाउन हुँदाहुँदै पनि उनीहरू किन त्यसरी हिँडिरहेका छन् ? उनीहरूको वास्तविक समस्या तत्काल पहिचान गरी सम्बोधन गरिहाल्नुस्,’ प्रधानमन्त्रीको निर्देशन उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने, ‘त्यसैले उनीहरूका समस्या के–के हुन् ?, वास्तविक विपन्नले किन राहत पाउन सकेनन् ?, गहिराइमै पुगेर उनीहरूको समस्या सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्ने काम गर्नुस् ।’ प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार शनिबारबाटै विपन्नहरूलाई यथोचित राहत र उद्धारको काम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने एक मन्त्रीले बताए ।
‘देशभित्र हुन् या बाहिर हाम्रा नागरिकहरूको जीवनरक्षा गर्ने, उनीहरू कस्तो अवस्थामा छन्, सबै जानकारी लिएर सम्बन्धित देशका सरकारहरूसँग आवश्यक समन्वय गरेर सबै दुःख, अप्ठ्यारोबाट नागरिकहरूलाई कसरी संरक्षित गर्ने ? राज्यको दायित्व हो,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘म आफैँले विभिन्न देशका प्रमुखहरूसँग निरन्तर कुरा गरिरहेको छु, यो कामलाई सम्बन्धित मन्त्रीले पनि गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउनुहोला ।’
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले घर जान चाहने पैदलयात्रुलाई उनीहरूको घरसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन गरिएको लकडाउनका कारण सडकमा अलपत्र परेकाहरूलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पठाउन सरकारका नाममा शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले गाउँ फर्कन भनेर हिँडेर बाटोमा अलपत्र परेका व्यक्तिलाई निःशुल्क यातायात व्यवस्था गरी गन्तव्यमा पु‍र्‍याउन र शंकास्पदलाई क्वारेन्टाइमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
काठमाडाैं : आप्रवासी नेपाली कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित हुने क्रम बढ्दै गइरहेकाले उनीहरूको यथाशक्य चाँडो व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगका पदाधिकारीहरूले शुक्रबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई भेटेर स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीलाई ल्याउन आवश्यक तयारी र व्यवस्थापन गर्न पनि सुझाएका छन् ।
आयोगले बिहीबार अलपत्र परेका सीमान्तकृत तथा श्रमिक वर्गको मानवअधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने बताएको थियो । ‘अनुगमनका क्रममा ज्यालादारी गरिरहेका मजदुरहरू, बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, गर्भवतीहरू असुरक्षित रूपमा आफ्नो गन्तव्यतिर हिँडिरहेका छन् । व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सुरक्षा गर्न आयोग नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग विशेष आग्रह गर्दछ,’ आयोगले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
साडियो माने रियल आउने पक्का !